Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Denis Suarez Ụmụaka Akụkọ Gbasara Akwukwo Nsogbu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha "Filipo". Anyị Denis Suarez Ụmụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a gụnyere ndụ nwata ya, ndabere ezinụlọ ya, akụkọ ndụ tupu aha ya, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe ya.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ na-eburu nna nna yiri ya na kpakpando Uruguayan Luis Suarez. Otú ọ dị, nanị mmadụ ole na ole na-atụle Denis Suarez Biography bụ nke na-akpali mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Denis Suarez Ụmụaka Akụkọ Gụnyere akụkọ na-adịghị mma akụkọ- Ndụ mbido
Malite, aha ya zuru oke Denis Suárez Fernández. Denis Suarez ka a na-akpọkarị ya n'ụbọchị 6th nke January 1994 ka ndị mụrụ ya na Salceda de Caselas, Spain.
A mụrụ Denis n'etiti ezinụlọ. Nne ya bụ onye na-edozi ntụrụndụ ọkachamara mgbe papa ya bụ onye ọchụnta ego nke na-anọghị ebe ọ bụ na obere Denis bụ nwata. N'okpuru bụ foto nke nne na nna Denis Suarez. Nne ya na-egbuke egbuke na-ekwu ọtụtụ ihe banyere ọrụ ya.
Ezinụlọ Denis Suarez sitere na Galicia agbụrụ nke Spain. Dị ka a na-ahụ site na map dị n'okpuru, agbụrụ a na-ekpuchi ókè nke Northern Portugal.
Denis etoliteghi na nwata nke nne na nna ya. Ya na nwanne ya nwanyị toro na nne ha. Ọ bụrụ na ị na-eche onye ọzọ nwanyị ahụ bụ, nke ọma ... ọ bụ ya bụbu enyi nwanyị.
Little Denis Suarez malitere ịkụ bọl dị ka afọ atọ. N'oge ahụ, ọ ga-akpụzi ma gbanwee balloons ya, na-agagharị na bọl bọl ma mgbe ahụ, gaa n'ihu na-akụ ya ehihie na abalị. Ọtụtụ mgbe, ntakịrị Denis ga-eji nwayọọ nwayọọ na-egbu ya, nke mere ka ọ gbasaa chandeliers, vases na ihe kachasị mkpa na-ebibi osisi n'èzí nke nne ya Salon (Ntụle na-atụghị anya ya).
Mgbe nna ya na-enweghị nna ma hụ na nne ya na-ezuru ya, Little Keis mesịrị mee ka ọ banye n'otu ìgwè na ndị ọzọ iji gbochie ya ka ọ ghara imebi osisi ndị dị n'èzí ụlọ mama ya.
Denis Suarez Ụmụaka Akụkọ Gụnyere akụkọ na-adịghị mma akụkọ- Ndụ Ndụ Mmalite
Denis Suarez ama hapụrụ ụlọ ndị na-edozi isi ya na ndị ikwu ya na-anọghị na ya. Nke a mere mgbe ya na nwa ya bụ Denis gara njem 90 nkeji na Porriño Industrial Football na ndị ọzọ iji debanye aha nwa ya maka ule.
Lucky Denis Suarez weere ule ndị ahụ, mama ya nọgidere na-achụ àjà iji soro ya gaa ọzụzụ mgbe di ya na-arụ ọrụ ụbọchị niile. Mgbe ọ nọ na Porriño Industrial, a na-ewere Little Denis ka ọ bụrụ onye kasị mma n'etiti ndị ọgbọ ya.
Ka afọ na-aga, Denis nwere ike ịkwado onwe ya n'enweghị ịdabere na mama ya. O mechara gaa n'ihu na ya ga-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme nke ọma na Celta Vigo na 2009.
Denis Suarez Ụmụaka Akụkọ Gụnyere akụkọ na-adịghị mma akụkọ- Ụzọ Ebube
Ịhapụ Mpaghara Nkasi Obi ya:
Manchester City n'oge ha na-agagharị agagharị na-achọ ndị na-egwu egwu kachasị mma na Europe maka ma ndị agadi ma ndị obere. Scouting dị na Spen, ụlọ ọrụ ahụ hụrụ otu ọkachamara na Denis Suarez bụ onye na-eto eto na Celta n'oge ọ bụ nwata.
Denis Suarez wee si Spain gaa England. Mgbe ọ dị afọ 17, nwa Denis dịka ya Brahim Diaz hụrụ onwe ya ka a gụrụ ya na omenala Bekee ọhụrụ, usoro ọzụzụ na àgwà. Na 21 Septemba 2016, Díaz mere ndị mbụ na-amalite maka City nke o mere na ihe ijuanya nke ìgwè mmadụ.
Nke a na-enye ya ọrụ ọkachamara ụbọchị ise mgbe e mesịrị. N'oge ahụkwa, Denis ghọrọ onye na-atụgharị uche n'ụzọ dị ukwuu. Denis Suarez mechara nweta akara ngosi Player nke Year Award na 2012. O kwalitekwara nzere ya site n'inweta 2012 European Championship na ndị Ukoi U19 ya Spanish.
Feud na Manchester City:
Mgbe nkwekọrịta ọkachamara, Denis Suarez mesiri obi ike na ya ga-abụ akụkụ nke ndị ọrụ mbụ. Ka oge na-aga, ọ na-ewute ya ịhụ onwe ya enweghị egwuregwu ndị okenye. Iji mee ka ọ dịkwuo njọ, a na-akpọrọ ya gaa n'òtù ndị ntorobịa nke ụlọ ọrụ ahụ. N'ịbụ onye na-awụ akpata oyi n'ahụ, ọbụna na mkpokọta okorobịa nke Man City, Dennis ka gọrọ agọ. N'ikwu banyere ihe mgbu ahụ, Denis kwuru ozugbo ...
"Òtù ndị ntorobịa nwere onye England na-amasị bọl ogologo. Mgbe m rutere, obere ka m bụ, ọ ghaghị icheworị 'ebee ka nwa a si?' ma o doro anya, anaghị m egwuri egwu. '"
Otu ụbọchị mwute, mgbe ọ nwụsịrị egwuregwu ọzọ maka ìgwè ndị ntorobịa ahụ, Denis Suarez nwere nkụda mmụọ gara hụ Man City's Football Officer, Marwood na-agwa ya ...: 'lee, echi m na-agba ọsọ azụ n'ụlọ n'ihi na anaghị m egwuri egwu ma anaghị m achọ ịnọnyere ebe a.' Akụkọ nyo;
Ọbụna onye isi obodo Spanish City na-agba mbọ na Denis kwusiri ike ịnọ ebe ọ na-egeghị ntị ma kpebie ịpụ n'ụgbọ ahụ n'echi ya dị ka ọ dị na mbụ. Denis Suarez nabatara otu ndị Barcelona B.
Denis Suarez Ụmụaka Akụkọ Gụnyere akụkọ na-adịghị mma akụkọ- Bilie na-ewu ewu
Denis Suarez mgbe otu oge na ndị ọrụ Baca B Batara aka na Sevilla ebe o zutere ya Unai Emery, bụ onye ya na ya dị n'ezigbo mma. Unai Emery edu Denis Suarez na ndị otu ya na mmeri mmeri Europa.
Denis mgbe o meriri Europa Njikọ ya na ndị otu ya na-emesị gosipụta ihe ọ ga-emeli na nnukwu ogbo. Nke a na-akwụ Denis ka ọ kwaga Villarreal ebe ọ bụ akụkụ nke ndị otu na La Liga nke anọ. N'ịgbaso ọrụ dị otú a, FC Barcelona mesịrị jide nwoke ahụ ha na-etinye na mbinye ego na-aga nke ọma.
Dị ka n'oge ederede, ọ na-amasị Suarez na-arụ ọrụ Unai Emery ọzọ. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Denis Suarez Ụmụaka Akụkọ Gụnyere akụkọ na-adịghị mma akụkọ- Ndụ mmekọrịta
N'okpuru nwoke ukwu ọ bụla, e nwere nwanyị, ya mere okwu ahụ ga-aga. Na nke a, n'azụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ịgba ọsọ Spanish ọ bụla nwere ihe ịga nke ọma, e nwere n'ezie ọmarịcha egwu. A na - ahụ ya na onye mara mma nke Nadia Aviles nke bụ 21 (4 afọ dị obere karịa nwoke ya) dị ka n'oge ederede.
A mụrụ Nadia ma zụlite na Barcelona. Ọ malitere ịlụ Danis Suarez obere oge mgbe ya na enyi nwanyị ya bụ Sandra Montoto, bụ onye pụtara na foto mbụ Denis Suarez, pụtara.
Ọ dị ka mmekọrịta Denis na Sandra Montoto dugara ọmụmụ nwa ya aha ya bụ Lucas.
Mara mma Nadia bụ ihe nlereanya, arụ ọrụ nlekọta na ọrụ site n'ọrụ. Ọ na-etu ọnụ karịa 125,000 ụmụazụ na Instagram ndị na-emekarị dọtara ya egbugbere ọnụ ịwa ahụ (Cautro Report).
Nadia na Denis adịghị enwe ihere na ha gosipụtara na ha hụrụ ha n'anya nke ukwuu na mgbasa ozi mgbasaozi ha. Ọ bụ naanị oge tupu alụmdi na nwunye abịa abịa.
Ị maara?… Denis Suarez abughi onye enyi ya bu enyi. A na-ekwu na Nadia na-akpọ Enzo Zidane nwa Zidine Zidane na 2017. Dị ka n'oge ederede, ọ raara onwe ya nye maka ịkwado ọrụ enyi ya nwoke.
Denis Suarez Ụmụaka Akụkọ Gụnyere akụkọ na-adịghị mma akụkọ- Ndụ nke Onye
Ịmata Denis Suarez Ihe gbasara ndụ onye ọ bụla ga-enyere aka n'ịhụ ya zuru ezu.
Denis bụ onye na-adịghị ewe iwe na onye na-agbanwe mgbe niile ihe ndị ọzọ chọrọ n'aka ya. Ọ bụ ya mere ezigbo ndị enyi ya na Barca B ji nye ya aha ahụ; "Filipo". Aha aha a na-egosi enweghị mmasị ime ihe ọbụla na mmetụta nke egocentric.
N'ịbụ enyi na enyi ya nwanyị na ezinụlọ ya, nanị ịgba egwu na-emezu ya. Ọ hụrụ ihe oriri na ọṅụṅụ, ihe ọṅụṅụ oroma, ntụwichi turkey, banana ma na-eme ka apụl. Ọ naghị agbaghara ịgbaghara na mmekọrịta ya na ọ ga-ahọrọ ịbụ onye uweojii ma ọ bụ kpakpando tennis ma ọ bụrụ na ọ banyeghị bọl. Denis bụ onye na-agba chaa chaa na ihe oyiyi ya bụ Rafael Nadal.
Denis Suarez Ụmụaka Akụkọ Gụnyere akụkọ na-adịghị mma akụkọ- si ebi ndụ
Denis Suarez abụghị ụdị ndị na-agba ndụ na-ebi ndụ Lavish Web, bụ nke ọtụtụ njirimara mara mma mara. Ọ bụ ezie na ọ bara uru Audi ụgbọ ala si FC Barcelona sponsor Audi.
Na foto dị n'elu, Suarez nwere obi ụtọ dị ukwuu mgbe ọ na - enweta mkpịsị ugodi ya Audi RS 6 Nlereanya ịrụ ọrụ n'ihu.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Denis Suarez Child Story plus Nzuzo Biography Eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Martin Braithwaite Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Paco Alcacer Nwatakịrị Akụkọ Plus Na-adịghị Eke Eziokwu Akụkọ
Bọchị gbanwee: Eprel 9, 2020